Tag: yevhidhiyo yevhidhiyo
Maitiro Ekugadzirisa Yako Youtube Vhidhiyo uye Chiteshi
Muvhuro, June 28, 2021 Muvhuro, June 28, 2021 Douglas Karr
Takaramba tichishanda pane yedu yekumisikidza gwaro kune vedu vatengi. Kunyange isu tichiongorora uye tichipa vatengi vedu izvo zvisiri izvo uye nei zvisiri izvo, zvakakosha kuti isu tipewo nhungamiro yekuti tingagadzirise sei nyaya. Kana isu tichiongorora vatengi vedu, isu tinogara tichishamisika nekushomeka kwesimba kunoiswa mukuvandudza kwavo Youtube kuvepo uye neruzivo rwakabatana nemavhidhiyo avanoteedzera. Vazhinji vanongoisa vhidhiyo, isa musoro wacho,
Chipiri, February 9, 2021 Chitatu, Kukadzi 24, 2021 Douglas Karr
Martech Zone yapfuura nematanho akawanda kubva pakatangwa muna 2005. Isu tashandura dunhu redu, takatamisa saiti kuti ive itsva inomiririra, uye tikapihwa mazita kakawanda. Ikozvino pane zvinopfuura zviuru zvishanu zvinyorwa pano zvine vangangoita zviuru gumi zvirevo pane saiti. Kuchengeta saiti ine hutano kune vashanyi vedu uye neinjini dzekutsvaga munguva iyoyo kwave kuri kwakaoma. Imwe yematambudziko aya kuongorora uye kugadzirisa zvakaputsika zvinongedzo. Zvinokanganisa zvinongedzo zvinotyisa - kwete chete
Une bhizinesi diki? Tsvagurudzo yeGoogle inoratidza kuti vhidhiyo yepamhepo inokwanisa kusimudzira mukutengesa kwechitoro ne6%, uye kusimudzira kurangarira kwechiratidzo neinosvika 50%. Google neAmerican Express vari kubatana pamwe nekugadzira mavhidhiyo emabhizimusi madiki kusimudzira bhizinesi ravo diki kuburikidza nekushandisa vhidhiyo. Yangu Bhizinesi Nhau chishandiso chemahara chemabhizimusi madiki kubva kuGoogle neAmerican Express. Chishandiso chinopa nhanho-nhanho nongedzo kune varidzi vemabhizinesi madiki ekugadzira